Eto’o Oo Noqday Cadowga 1aad ee Mourinho, Mar Kalena Weeraray
HomeAfricaEto’o Oo Noqday Cadowga 1aad ee Mourinho, Mar Kalena Weeraray
02/06/2014 Abdiwahab Ahmed
Weeraryahanka 33 jirka ah ee reer Cameroon, Samuel Eto’o ayaa mar kale ku celiyey dabbaal-deg huwan dhalleecayn uu u jeedinayo tababarihiisii xagaagii tegay Jose Mourinho, kaas oo ay dhex martay xurguf ku saabsan da’da ciyaaryahanka oo uu Jose wax ka sheegay.
Axaddii toddobaadkan, waxa uu xulka Cameroon la ciyaaray wadanka Jarmalka, waxaanay ku kala baxeen 2-2, laakiin waxa ciyaartaas xamaasadeeyey Samuel Eto’o oo markii uu goolka koowaad u dhaliyey xulkiisa ku celiyey dabaal-deg uu sameeyey ciyaartii Tottenham ee xili-ciyaareedka tegay, markaas oo inta uu dhabarka qabsaday uu u dhaqaaqay sidii Oday da’ ah, taas oo ahayd jawaab uu siinayay Mourinho.
Bishii February ee sannadkan ayaa tababare Mourinho isaga oo jooga Switzerland, waxa wax laga weydiiyey tayada ciyaaryahan Eto’o, waxase uu kaga jawaabay hadal uu ka xumaaday Eto’o, kaas oo ahaa “Eto’o wuu ka weyn yahay da’da uu sheegto”.
Inkasta oo ay Mourinho iyo Eto’o xidhiidh fiican lahaayeen markii ay wada joogeen Inter Milan, haddana markii ay hal sanno ka wada shaqeeyeen Chelsea, waxa ay noqdeen niman aan isku fiicnayn, waxaana mar uu Eto’o ka jawaabay hadalka Mourinho uu sheegay in tababarihiisu uu yahay Doqon.
“Maanta, da’daydu waaa 33 sannadood, mana aha inaad rumaysataan Doqon igu tilmaamay inaan ahay oday” sidaa waxa 15 May yidhi Eto’o oo u jawaabayay Mourinho, waxaanu intaa ku daray in uu jidh ahaan caafimaad qabo, uuna dareemayo in uu qaban karo in ka badan inta ay qabtaan ciyaartooyada da’doodu yartahay.
Eto’o wuu ka dhamaaday heshiiska sannadka ahaa ee uu kula joogay Chelsea, waxaana lagu soo waramayaa in uu u socdo kooxda Guangzhou Evergrade ee ka dhisan wadanka China, laakiin waxa laga yaabaa inay wareeggiisa carqalad ku noqoto mushaharka badan ee uu ciyaartoygu doonayo.
Messi Oo Kaliya Ayaa Ka Dheereya Mohamed Salah
20/03/2015 Abdiwahab Ahmed